Banaanbaxyo looga soo horjeedo dilka fanaanka caan ahaa oo ka socda Addis Ababa - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Banaanbaxyo looga soo horjeedo dilka fanaanka caan ahaa oo ka socda Addis...
Banaanbaxyo looga soo horjeedo dilka fanaanka caan ahaa oo ka socda Addis Ababa
Banaanbaxyo looga soo horjeedo dilka fanaanka caan ahaa Haacaaluu Hundeessaa oo ka socda magalaada Addis Ababa. Fanaankaan oo ka soo jeedo qowmiyada oromada ayaa aad ugu soo hor jeeda Ra,iisul Wasaaraha itobiya abiy ahmed fananka ayaa maalmihii lasoo dhaafey ku gudo jiray abaabul shacab.
Waxa uuna malmihii ugu danbeeyay Talaafishinada iyo idaacadaha ka abaabulaayay kacdoon shacab oo looga soo hor jeedo dowladda uu hogaamiye Abiy Axamd oo mudo xileedkeeda dhawaan la kordhiyay.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Codsatay kamid noqoshada Golaha Ammaanka ee QM.
Next articleSomalia postpones presidential elections by 13 months over COVID